အဆုတ်ရောင် - အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်ရောဂါလက္ခဏာများ, အဆုတ်ရောင်လက္ခဏာ (အဆုတ်ရောင်)
အဆုတ်ရောင် - သငျမသိခဲ့ပါရသောလက္ခဏာများ,
အဆုတ်ရောင်, ကွဲပြားခြားနားသောသက်ရှိအတွက်နည်းလမ်းများစွာ၌ထင်ရှားနိုင်သည့်များ၏ရောဂါလက္ခဏာတစ်ခုစူးရှသောအဆုတ်ရောဂါဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါရောဂါကူးစက်နှင့်သဘာဝရောင်ရမ်းဖြစ်ပါတယ်။ စည်းကမ်းကြောင့်အဆုတ်တစ်သျှူးအပေါငျးတို့သ element တွေပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ထွက်လှည့်နှင့်ကုသမှုရောဂါနှင့်အတူကိုင်တွယ်မပါဘူးဆိုရင်, ကအလေးအနက်အကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
အဆုတ်ရောင်ခြင်းရောဂါပိုး၏ရလဒ်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ဤသည်ကိုမှန်ကန်စွာရောဂါရှာဖွေရေးမှာကဆက်ဆံဖို့ကိုစတင်ယင်းရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်မှဒါခက်ခဲသည်မဟုတ်, အရေးယူရမည့်အချိန်ကိုအမြဲဖြစ်နိုင်သမျှမပါရှိလျှင်စာရင်းဇယားအရသိရသည် 1000. အတွက် 12-14 လူတွေ့သော, တစ်ဘုံရောဂါဖြစ်ပါသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ယခုတိုင်အောင်အဆုတ်ရောင်တစ်ဦးအသက်အန္တရာယ်နာမကျန်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါအန္တရာယ်အဆုတ်ရောင်? ရောဂါပြင်းထန်ပုံစံအဆုတ်တစ်သျှူးများပျက်စီးခြင်းဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပြီး, အဆိပ်ထိတွေ့နှလုံး, Hepatic, ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်, အဆိပ်သင့်ထိတ်လန့်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အဆုတ်ရောင်အကြောင်းရင်းများနှင့် Non-အဆုတ်ရောဂါများ:
အဆုတ်ရောင် - အမျိုးအစားများ
လူကြီးများနှင့်ကလေးများရောဂါများအမျိုးမျိုးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆုတ်ရောင်အမျိုးအစားများအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များပေါ် မူတည်. ဆုံးဖြတ်ထားကြသည်:
ဤသည်စူးရှသောရောင်ရမ်းခြင်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်တစ်သျှူးများကန့်သတ်ဧရိယာများအပေါ်ရောင်ခြင်း၏ဖြစ်ပျက်မှုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာအသီးအသီးအမှုအတွက်ရောဂါလက္ခဏာတွေကွဲပြားခြားနားထင်ရှားသည့်နဲ့ Lobular အဆုတ်ရောင်, ။ အဆုတ် segments များ - များသောအားဖြင့်ကသေးငယ်တဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာယူနစ်ပါဝင်သည်။ လူကြီးများအတွက် focal အဆုတ်ရောင်အများဆုံးကိစ္စများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
ရောဂါ၏ဤပုံစံများတွင်အကြီးအကျယ်နှစ်နိုင်ငံရောင်ရမ်းရှုလေ့လာသည်။ မူးယစ် syndrome ရောဂါအသံထွက်လူကြီးများအတွက် lobar အဆုတ်ရောင်ဖြင့်လိုက်ပါသွား။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်ထိုသို့ပြည်တွင်းရေးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများတွင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းအလယ်တန်းပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့်ဖြည့်ဆည်းသည်။ လူနာအချိန်မီကုသမှုမခံမယူလျှင်, ရောဂါဗေဒနှောက် hypoxia သို့မဟုတ်နှလုံးသွေးကြောနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပျက်ကွက်၏ရလဒ်အဖြစ်သူ၏သေခြင်း၏အရေးပေါ်အခန်းဆီသို့ဦးတည်နိုင်ပါတယ်။
Lobar အဆုတ်ရောင်, အများအားဖြင့်လေးအဆင့်ဆင့်အတွက်အသံထွက်တီထွင်ထားတဲ့၏ရောဂါလက္ခဏာများ:
ဒါဟာ alveoli တိုးချဲ့ထားတဲ့အဘို့ 1-3 ရက်ကြာ, သူတို့သည် exudate စုပြုံ။
ဒါဟာ 3-5 ရက်အတွင်းကြာရှည်ခံသည်။ အဆိုပါ alveoli လေကြောင်းကနေအိုးအိမ်မဲ့ဤကာလအတွင်း leukocytes, erythrocytes, တဲ့ epithelial cells်fibrous exudate ဖြင့်အစားထိုးသည်။
အဆိုပါ exudate leukocytes ကိုပြဌာန်းပေးခဲ့ပါသည်။
ဒါဟာ 7-11 ၏နေ့၌လာပါတယ်။ fibrin ၏ resorption ၏လုပ်ငန်းစဉ်။
တစ်ဦးတည်းသာအဆုတ်ထဲမှာရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရောဂါ၏ဤအမျိုးအစားသည်။ right-တဖက်သတ်စူးရှသောအဆုတ်ရောင်လက်ဝဲလက်ကိုပိုမိုဘုံဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာ bronchus Oblique အောက်ဖက်ဖြစ်ပြီးရောဂါပိုးမြို့သားစုပြုံကြိုက်တတ်တဲ့သောအကြောင်းပြချက်။ ထို့အပြင်ခန္ဓာကိုယ်ဘယ်ဖက်ထက်အနည်းငယ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်တိုတောင်းသည်။ Right-ဘက်အဆုတ်ရောင်ရောဂါလက္ခဏာတွေချက်ချင်းပြသနိုင်ဖို့ကိုစတင်အဖြစ်, ပြဿနာများကာကွယ်တားဆီးဖို့စေ့စေ့စပ်စပ်ရောဂါခံယူသင့်ပါတယ်။
ရှုံးနိမ့်ခြင်းနှင့်လက်ဝဲနှင့်လက်ယာအဆုတ်ဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာသောဤပြင်းထန်သောအဆုတ်ရောဂါဗေဒ။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်နှစ်နိုင်ငံအဆုတ်ရောင် - ဘက်တီးရီးယား pneumococcus ၏လှုပ်ရှားမှုများ၏ရလဒ်။ ရောဂါအလေးအနက်ထားဖြစ်ပေါ်မကြာခဏတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်အသေခံဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသောရောဂါများကိုပေးသည်။ နှစ်နိုင်ငံအဆုတ်ရောင်ရောဂါလက္ခဏာတွေမဆိုအသက်လူနာများ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းကိုထင်ရှားစွာပြ, ဒါပေမယ့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကအပြည့်အဝကိုဖွဲ့စည်းခဲ့သို့မဟုတ်အားနည်းသည်မဟုတ်ခဲ့ကြသောသူတို့အားရေတံခွန်ခံရဖို့ပိုများပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
အဆုတ်ရောင် - အကြောင်းရင်းများ
inflammatory ဖြစ်စဉ်များကွဲပြားခြားနားသောဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကြောင့်စတင်ပါ။ အထက်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရောင်ခြင်းမှမကြာသေးမှီကခဲနှင့်ဘက်တီးရီးယားများအတွက်အဆင်သင့်သောအခြေအနေများဖန်တီးပါ။ ရောဂါပိုး - ရိုးရှင်းစွာအ, အဆုတ်ရောင်၏အဓိကအကြောင်းရင်းများထားတော်မူ၏။ ထည့်သွင်းစဉ်းစားအဆုတ်ရောင်ရောဂါကူးစက်အချက်တွေ Condusive နေသောခေါင်းစဉ်:
နာတာရှည်ရောဂါ (နှလုံး, ကျောက်ကပ်, အဆုတ်);
အဟောင်းတွေအသက်အရွယ် (60 ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူနာအဆုတ်ရောင်ကနေဆငျးရဲဒုက်ခနှင့်မကြာခဏ);
နီးပါးအမြဲ, အရောဂါပိုးဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှတဆင့်အဆုတ်ထဲသို့ဝင်။ ရှားပါးကိစ္စများတွင်ရောဂါကူးစက်ကိုယ်ခန္ဓာ၌ပစ္စုပ္ပန်ကူးစက်မှုသည်အခြား foci ကနေသွေးကြောမှတစ်ဆင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါရောဂါပိုးကိုပုအဆုတ်တစ်သျှူးသို့မိတ်ဆက်ပြီးတာနဲ့, ရောင်ရမ်းဖွံ့ဖြိုးနှင့် macrophages မှမိမိအသွေးဆဲလ်တွေရှာ, အရည်များစုစည်းနေခြင်းကစတင်ခဲ့သည်။
Klebsiella coli ၏လှုပ်ရှားမှုများအပြင်, အဆုတ်ရောင်သည်ဤရောဂါပိုးများအတွက်စတင်နိုင်သည်
အဆိုပါ genus Candida ၏မှို;
တုပ်ကွေးရောဂါဗိုင်းရပ်စ်များ, parainfluenza, rhinovirus ။
အဆုတ်ရောင်ရောဂါလက္ခဏာတွေထုတ်ဖော်ပြောဆိုသို့မဟုတ်ဖျက်နိုင်ပါသည်။ အဆုတ်ရောင်လည်း atypical ဖြစ်ပြီး, တခါတရံတွင်သူကမျိုးကို Asymptomatic ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ အခက်ခဲဆုံးရောဂါအဘယ်သူ၏ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကအားနည်းသောသက်ကြီးရွယ်အိုများ, ကလေးများနှင့်လူများကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီလိုလူနာပြဿနာများရင်ဆိုင်နေကြနှင့်ပိုပြီးအထူးကြပ်မတ်စောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ဖို့ပိုများပါတယ်။ ထို့အပွငျကပထမဦးဆုံးလက္ခဏာတွေ၏ဖြစ်ပျက်မှုအပြီးတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးစတင်နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်အဆုတ်ရောင်ရောဂါလက္ခဏာများဒါဖြစ်နိုင်သည်
မကျန်းမာမျက်နှာ (က nasolabial တြိဂံ၏ cyanosis ဖြင့်လိုက်ပါသွားလျှင်, ကတစ်သျှူး hypoxia ၏ညွှန်ပြဖြစ်နိုင်သည် နှစ်နိုင်ငံအဆုတ်ရောင် ) ။
အဆုတ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်အပူချိန်နှင့်ကြောင့်မပါဘဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ အတော်များများကလူနာတောင်မှ antipyretics (- အဆုတ်ရောင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများထဲမှအထူးပြုဆေးဝါးများ၏စွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်း) ခေါက်မကသောအပူကနေခံစားနေကြရသည်။ သူတို့ကအပူချိန် 39 မှခုန် - 40 ဒီဂရီ, သာအီခံစားရသူကိုလူနာရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာကော်လံသာမိုမီတာ 37.5 ဒီဂရီအထက်မထပါဘူး, ဒါပေမယ့်ပင်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, သင်ဖြစ်ကောင်းဆရာဝန်တစ်ဦးကိုတွေ့မြင်သငျ့သညျ။
ဒါဟာရောဂါ၏အဓိကရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စည်းကမ်းအတိုင်း, ချောင်းဆိုး၏အစောပိုင်းအဆင့်ခြောက်သွေ့ကြောင့်အဆက်မပြတ် bugged လူနာတိုက်ခိုက်သောကြောင့်, အီအများကြီးပေးသည်။ နာမကျန်းချောင်းဆိုး၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူစိုစွတ်သောဖြစ်လာသည်နှင့်အချွဲကိုက်ညီမှုအဝါရောင်-စိမ်းအရောင်၏ expectoration ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည်။ တိုက်ခိုက်မှုရင်ဘတ်နာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံရေယုန်ဟာသူတို့ရဲ့နောက်ခံပေါ်တွင်အဖု။
သူကပြဿနာတွေအများကြီးယူဆောင်လာသျောလညျး, ချောင်းဆိုးနေတဲ့ "အကောင်း" လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်နှင့်ရောဂါကူးစက်ပေါ်လာထံမှချွဲနှင့်အတူတိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်း။ ချောင်းဆိုးခြင်းမရှိဘဲအဆုတ်ရောင်ဖြစ်ပေါ်ပါကရောဂါဖြစ်စေတဲ့အမှုန်ခန္ဓာကိုယ်ထဲတွင်ရှိနေဆဲများပြားဆက်လက်နှင့်ပြဿနာများစရာတွေကြောင်းဆိုလိုသည်။ မရှိခြင်းသိမ်းယူမှုမကြာသေးမီကချောင်းဆိုးရင်ကျပ်ခြင်းနှင့် laryngitis ခဲ့ကြသူလူနာများကိုအတွက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ရောဂါ၏ဤပုံစံများသောအားဖြင့် antitussive မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူလျှော့ကိုယ်ခံစွမ်းအား, ထိန်းအကွပ်မဲ့လက်ခံရရှိအစွမ်းထက် antibacterial အေးဂျင့်သို့မဟုတ်ကြာရှည်ကုသမှုတစ်ခုနောက်ခံပေါ်တွင်ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အဆုတ်ရောင်လက္ခဏာများပျက်ကွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရောဂါ, ရောဂါဖွံ့ဖြိုးလိုလျှင် "အဆုတ်ရောင်က hidden ။ " ရောဂါ၏အဓိကလက္ခဏာအသက်ရှုရုတ်တရက်ရင်ကြပ်ဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးချင်းလူနာက hidden ရောင်ရမ်းခြင်း၎င်းတို့သည်အသက်ပြင်းပြင်းရှူတာ, မူးဝြေခင်းကိုခံစားရကြောင်းသတိထားမိပေမည်။
မျိုးကို Asymptomatic အဆုတ်ရောင်အသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ကဲ့သို့သောမြေပေါ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးနိုင်ပါတယ်:
ကိစ္စအများစုတွင်, စာမေးပွဲကာလအတွင်းဆရာဝန်တစ်ဦး၏တစ်ဦးရောင်ရမ်းနေတဲ့သံသယရှိပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာအဆုတ်ရောင်၏ရောဂါ က X-Ray အဆုံးအဖြတ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါဟာမူလတန်းအဖြေရှာတဲ့ကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ Radiograph ရှင်းလင်းစွာရောင်ရမ်းခြင်း၏အာရုံစူးစိုက်ပြသထားတယ်။ X-Ray အပြင်, တစ်ဦးအထူးကုဓာတ်ခွဲခန်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်လိပ်ဆနျးစစျသငျ့သညျ။ အဆိုပါလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည့်အဆုတ်ရောင်၏သဘောသဘာဝကိုဖေါ်ထုတ်ခြင်းနှင့်ထိရောက်သောကုသမှု၏ရက်ချိန်းကိုအားပေးအားမြှောက်သောအကြောင်းတရားများအေးဂျင့်, သိရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးသည်။
ရောဂါ၏အရေးပါသောဇာတ်စင် - အသွေးလေ့လာမှု။ သွေးဖြူဥဆဲလ်များ၏တိုးပွားလာအရေအတွက်ရောဂါတစ်ခုဗိုင်းရပ်စ်သို့မဟုတ်ဘက်တီးရီးယားမူလအစဖော်ပြသည်။ နောက်ထပ်အဖြေရှာတဲ့နည်းလမ်း - bronchoscopy ။ ဤနှစ်မြို့ဖွယ်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ဒါဟာ bronchial ပြွန်ဆနျးစစျဖို့ကူညီပေးသည်။ နည်းလမ်း၏အနှစ်သာရ - လိုအပ်ပါကစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဘက်တော်သားကောက်ယူထားတဲ့မှတဆင့်နှာခေါင်းသို့မဟုတ်ပါးစပ်တစ်ပါးလွှာပြွန်မှတဆင့်မိတ်ဆက်စကားအတွက်ရောင်ရမ်းရာအရပျမြားနှငျ့ချွဲခြံစည်းရိုးဖြစ်ပါတယ်။
အဆုတ်ရောင် - ကုသမှု
ဒါကြောင့်တစ်ဦးဆေးရုံပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အထဲကယူသွားတတ်၏မယ်ဆိုရင်ကုထုံးပြည့်စုံခြင်း, ပိုကောင်းတဲ့ဖြစ်သင့်သည်။ အဆုတ်ရောင်ဆက်ဆံဖို့ကိုဘယ်လို, ဆရာဝန်ဆုံးဖြတ်သည်။ လူနာများ၏တာဝန် - အပေါငျးတို့သဆရာဝန်၏ဆေးညွှန်းနှင့်အတူတင်းကြပ်စွာလိုက်နာရန်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်, ထိုကုထုံးနှောင့်နှေးစေခြင်းငှါ, ထိုပြည်နယ် - ပိုမိုဆိုးရွားစေ။ ရောင်ရမ်းကုသမှုအောက်ပါအစီအမံများပါဝင်သည်:
မွှားလက်ခံခြင်း။ ပုံမှန်နှင့် Uncomplicated ရောဂါများတွင်ပဋိဇီဝဆေးများဆေးပြားသို့မဟုတ်တောင့ဖြစ်ကြသည်။ ရှိသမျှသည်အခြားသောကိစ္စများတွင်မူးယစ်ဆေးသွေးကြောသွင်းအုပ်ချုပ်သည်။
Physiotherapy ။ ချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာများမရှိဘဲတစ်ဖက်သတ်အဆုတ်ရောင်ခရမ်းလွန် irradiation နှင့်အခြားကုသမှုဖြင့်ကုသနိုင်ပါတယ်။
အဆုတ်သွေးတိုးရောဂါ - လက္ခဏာတွေ, ကုသ
Metoclopramide - Analogues
ကျောရိုးရှိသတ္တဝါသွေးလွှတ်ကြောရောဂါ - ခေါင်းကိုက်ဖယ်ရှားပစ်ရမည်ကဲ့သို့?
နှာခေါင်း Polydex မှုတ်ဆေးဘူး
နားကို Normaks ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်
Acute ပန်ကရိယ - ကုသ
Multivarka အတွက်မန္န - အရသာ pastries ချက်ပြုတ်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်နဲ့ရိုးရိုးစိတ်ကူး
Built-in ဗီရို Ironing ဘုတ်အဖွဲ့,
Lavash လိပ် - ချက်ပြုတ်နည်းများ
အတ္ထုပ္ပတ္တိ Enrique Iglesias
အခွံမာသီးနှင့်အတူ Meringue - စာရွက်
လျာထားသောလူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်ကြော်ငြာခြင်း - ဖန်ဆင်းခြင်း, Configuration နဲ့ start-up
မွေးကင်းစကလေးအတွက် Hydrocele ဝှေးစေ့